Mac Pro cusub ayaa yeelan kara naqshadda qadiimiga ah ee Mac Cube | Waxaan ka socdaa mac
Mac Pro cusub ayaa yeelan kara naqshadda taariikhiga ah ee 'Mac Cube'
Manuel Alonso | | Mac Pro, Xanta
Sannadkan wuxuu umuuqdaa inuu yahay sanadkii aan aragnay qaab cusub oo loo yaqaan 'iMac model' sida ku xusan wararka xanta ah qaarkood, waan arki karnaa laba nooc oo kala duwan oo loo yaqaan 'Mac Pro'. Moodel leh cabbir aan u baranay iyo moodal kale oo aad u xasuusin kara cabirka macmalka ah ee Mac G4 Cube. Marka waxaan lahaan doonnaa Mac Pro oo leh awoodiisa qiyaas ahaan ku dhaw Mac mini. Waa waalli dhab ah haddii wararkaasi ugu dambeyn run noqdaan.
Naqshadeynta hadda ee Mac Pro ayaa dhowaan nala joogtay, laakiin waxay umuuqataa in la joogo waqtigii la beddeli lahaa muuqaalka. Kaliya maaha gudaha laakiin sidoo kale dibedda. Si kale haddii loo dhigo, laguma xanto oo keliya in Mac Pro-ka cusubi uu wax ka beddelayo processor-kiisa, kaas oo loo qaatay in si fudud loo qaatay. Waxay la imaan doonaan Apple Silicon-ka cusub oo ay weheliyaan sidoo kale M1 chip cusub. Sidoo kale, sida muuqata waxay la imaan doonaan naqshad cusub oo dibadeed. waxaa jiri lahaa laba nooc. Mid leh cabir la mid ah kan hadda jira iyo mid cabbirka badhkiis ah oo aad xusuusan doontid, sida laga soo xigtay Bloomerg ilaa G4 Cube goor dambe.
Mac Pro-kan cusub ee lagu xasuusto waagii hore, waxay yeelan doontaa inta badan aluminium dibedda ah. Si kastaba ha noqotee, wali ma ogin goorta labadan ay suuqa aadi karaan moodooyinka cusub ee Mac Pro. Laakiin sida aan ognahay Apple waxay ka shaqeyneysaa sidii ay u dhameystiri laheyd ka guuritaankiisa dhamaan Mac-yada ilaa Apple Silicon. Kala guurka ayaa la filayaa inuu socdo laba sano waxaanan horeyba uheysanay moodallo lashaqeynaya processor-radan cusub.
Xanta ayaa tilmaameysa in Mac Pro cusub waxay imaan karaan dhamaadka 2021 iyo xitaa sanadka 2022. Dabcan, waan noqon doonnaa sugaya warkaan si ay u rumoobaan moodooyinka cusub iyo gaar ahaan tan loo malaynayo in loo yaqaan 'Mac Pro' oo leh kalabar cabbirka iyo qaabkaas gaarka ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Mac Pro cusub ayaa yeelan kara naqshadda taariikhiga ah ee 'Mac Cube'
Shaashad shaashad dhaqdhaqaaq leh oo "quful ku leh isticmaalka" Mac-gaaga cusub oo wata 'Big Sur'